Asa an-dranomasina : Voasambotra ilay nisoloky ho mpiasan’ny APMF -
AccueilSongandinaAsa an-dranomasina : Voasambotra ilay nisoloky ho mpiasan’ny APMF
Voasambotra ny ramatoa iray 42 taona, tompon’antoka tamin’ny raharaha fisolokiana avo lenta. Nitonona ho manana fahafahana mpampiditra olona hiasa an-dranomasina amin’ny fitaovam-pitaterana any amin’ny faritr’i Mahajanga. Teny 67Ha izy no nosamborin’ny polisy rehefa nanaovana vela-pandrika, ny alatsinainy lasa teo. Nanaovany taratasy hosoka avy amin’ny “Agence Portuaire Maritime et Fluviale” APMF mihitsy izany, ka notorian’ny tompon’andraikitra ny tenany. Nirohotra nanaraka ny fotoana nampakarana ny raharaha teny amin’ny fampanoavana etsy Anosy avokoa ny olona manodidina ny roapolo isa voasoloky, sy ireo nahazoana volabe.
Mihamahazo vahana hatrany indray mantsy tato ho ato ity karazana fisolokiana ity raha ny eto an-drenivohitra no asian-teny, ary mbola maro no roboka sy liana tanteraka amin’ity tolotra ataon’ireo mpisandoka andraikitra. Ity indray mitoraka ity dia ny filazana fa mahatafiditra olona hiasa an-tsambo, ary mampanantena karama ambony. Efa miendrika tambazotra mafampana mihitsy raha ny paikady nentin’izy ity maka ny volan’olona, nefa tsy misy akory ilay asa. Vehivavy sy lehilahy miisa roa mpandray anjara mivantana no voatonona tamin’ny raharaha. Tra-tehaky ny mpitandro filaminana ravehivavy, rehefa nokarohina fatratra tamin’ny fisolokiana vola hatramin’ny 5 Tapitrisa Ariary. Fantatra tamin’izany mantsy fa ity ramatoa ity no isan’ny voarohirohy voalohany taorian’ny naharaisana fitoriana momba azy ireo, ary tamin’izany no nanondrony ny namany, izay voapaingotra ho tafiditra tamin’ny fandraikiraikena, ka mbola karohina fatratra.
Olona dimy tamin’ireo voasoloky no notakian’ireo mpisoloky vola, izay nolazainy fa hikarakarana ny taratasy fandefasana ireo olona hiasa any amin’ny faritra. Izy ireo no manantona mitady olona hanaovana ny asa maloto, ary dia nanao taratasy hosoka. Narirariran’izy roa ireo foana ny olona izay nangalany vola taorian’ny fifanarahana, ka nanomboka niahiahy ny amin’ny mety tsy fahamarinan’ny varotra ireo lasibatra ary nametraka fitoriana. Naharay ny fitoriana ny polisy, ka nanamafy ny fitoriana sy ny hosoka natao tamin’ny anaran’izy ireo ny APMF. Notanana am-ponja vonjimaika noho izany ity atidoha nikotrika ity raharaha fisolokiana miaro fisandohana andraikitra nentina nanatanterahana asa ratsy, izay nahavoazana olona maro ity, rehefa avy natolotra teny anivon’ny fampanoavana, omaly.
Toa ny tamin’ireo tanàna nolalovany nandritra ny andro maromaro, dia noraisin’ny vahoakan’i Toliara tamin’ny horakora-pifaliana sy endrika miramirana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly. Tamin’izany fandalovany tao Toliara izany indrindra no nitokanany ary nanolorany ny vahoakan’Atsimo ...Tohiny